Maitiro ekuwedzera iyo isina kuverengwa dhairekita muMail | IPhone nhau
Kunyangwe paine chokwadi chekuti iko kunyorera kweMail kubata mameseji pane iOS kunosiya zvakanyanya kudikanwa yevanorema tsamba vashandisiIyo ine zvaisingakwanise zvakawanda, vazhinji ndivo vashandisi vanoishandisa nguva nenguva pazuva nezuva-zuva uye havagone kurarama vasina iyo. Kana maakaundi akawandisa eemail akagadziriswa, tinogona kusarudza kumisikidza inbox muchikumbiro kuti maemail ese averengerwe mutray imwechete zvisinei neiyo email yavakatumirwa.
Iyo yakabatana tireyi yanga iri imwe yeiyo Nhau dzakakosha idzo iOS dzakatiunzira mushanduro dzichangoburwa yeiyo inoshanda sisitimu yenharembozha yekambani yeCupertino-based. Asi kwete chete iyo yakabatana tireyi, asi zvakare mukana wekumisikidza huwandu hweti tireyi iyo yatinoda kuoneka mune yeemail application pese patinoivhura.
Nenzira iyi tinogona kuwedzera tray yakabatana, sezvandambotaura pamusoro, dhairekitori rine maemail ane mafaira akasungirirwa, maemail agamuchirwa nhasi, vese vakatumirwa, avo vari mumarara, zvakachengetwa ... Chero dhairekitori ratakasika musangano redu mail kuronga maemail.
Imwe yetireyi inobatsira mukati meMail application uye izvo nekutadza inogadziriswa ndiyo isina Kuverengwa Tsamba. Aya maforodha mapoka munzvimbo imwechete maemail ese atinogashira kubva kumaakaundi akasiyana atakagadzirisa mukushandisa. Kuti uratidze, iwe unofanirwa kungoita anotevera matanho:
Ratidza iyo isina Kuverengwa dhairekitori
Kutanga tichaenda kunyorera tsamba.
Tevere isu tinodzvanya pa Hora, iri kumusoro kurudyi kwescreen.
Panguva iyoyo maforodha ese atinogona kuwedzera kuMessage application anozoratidzwa. wedzera iyo isina Kuverengwa dhairekitori Isu tinongofanirwa kuenda kufolda irikubvunzwa uye kuisarudza, kuti imiswe nebhokisi rebhuruu.
Kana tangoita, tora paOk, iri mukona yekumusoro kurudyi, kwatakawana kare sarudzo yeHedha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwedzera iyo isina kuverengwa dhairekitori muMail